Hiran State - News: Wararkii ugu danbeeyey ee Hiiraan State iyo xaalada Alqacidada Hiiraan ku sugan tahay.
Wararkii ugu danbeeyey ee Hiiraan State iyo xaalada Alqacidada Hiiraan ku sugan tahay.
Arbaco 9,Maarso 2011 (HSOL)-Dhacdooyinka la yaab leh iyo qaasooriyin deg deg ah oo isku xig xiga oo maalmahani ku habsaday argagixisada ku soo duushay dalkeena hooyo ee magacyada badan sida Al-qacida iyo wiilasha yar yar ee Somaliyeed oo ay qaldeen lana baxay Shabaab iyo shaqsiyaad dano dhaqaalo daraadeed ugu biiray bur burinta dalka Somaliya ayaa hada xaalkoodu u muuqdaa ninkii dhoof ku yimidbey geeridu dhibeysaa.bal aanu dulmar guud ku sameyno meesha ay hada wax marayaan maanta.
Caasimada Mogdisho ee Somaliya.
Al qacidada Somaliya ka dagaalanto oo har iyo habeen dagaal u jooga ahaa oo iyagu markasta dagaalka soo qaadi jiray waxaa ku dhacay wax aysan dhawaantan fileyn waxeyna dagaaladii ugu danbeeyey ku waayeen maleeshiyo u badnaa Somali laakinse tiro muhiim ah oo ajaanib ah ayaa lagu dilay magaalda Mogdisho shaki kuma jiro in hadii 3 dagaal oo is xig xiga lagu qaado iney si toos ah u jabeyso argagixisada Somaliya ee ka amar qaata odayga waalan ee Sacuudiyanka ah ee ku xaniban buuraha Tooraboora.
Inta badan hogaamiyaashii ajaanibta ka dagaalanta dalka Somaliya kuwoodii dagaalka hogaaminayey iyo kuwii kaartada u jeexi jiray ciidanka ayaa noqday wax dhintay iyo wax dhaawacmay waxaana dhaawacooda loola cararay magaalada Belet weyne iyo Kismaayo halka kuwii Hiiraan State loola cararay la dhameystiray kedib xaaladooda oo noqotay hana dhiman hana noolaan.
Hiiraan State Alqacidada ku sugan.
Kedib dagaalkii dhawaantan ka dhacay agagaarka magaalada Belet weyne ee sida weyn loogu xasuuqay kuwii diinta ka been sheegayey ee la baxay alqacidada Hiiraan iyo wiilashii ay inkaarta waalidkood ku dhacday ee iyaguna Shabaabka la baxay oo dalkooda iyo dadkooda dulmiga ku hayey uu jab muuqda ka soo gaaray Hiiraan waxey hada xooga saareen Miino aasid oo aqligoodii waxuu ku soo aruuray iney dumiyaan wadooyinkii magaalda Belet weyne iyagoo miino ku aasay xarumaha dowlad goboleedka Hiiraan State sida xarunta gobolka iyo meelo kale oo muhiim ah kedib markii ay ogaadeen ineysan ku nagaadi doonin sii heysashada HS.
Warar xaqiiq ah ayaa sheegayo iney labo koox u kala jabeen alqacidadii joogtay halkaasi kuwo gerkii iyo shaarbahii iska xiiray oo isku egeysiiyey shacabka oo hada dalka si dhuumaaleysi ah uga baxayo, iyo kuwo xal u arkey iney magaalooyinka Hiiraan ku aasaan miino marba hadii aysan jirin xal kale oo ay hayaan. inta badan dhalinyarada Somaliyeed ee ku fikirka ah Shabaab iyo alqacida ayaa xitaa hadii uu dhaawac fudud soo gaaro la dhameystiraa maadama aysan sidii hore hada u heli karin daryeel joogto ah.Miinada maanta ku qaraxday afka hore ee magalada Belet weyne xiligii loogu talo galay wey ka soo hor martay waxaa loogu talo galay ciidanka ugu horeeya ee magaalada gali doona baabuurtooda. waxaa kale oo ay miinada ku aaseen meelo kale oo shacabku u badan yahiin sida Isbitaalka weyne gidaarkiisa hore,xarunta gobolka iyo saldhiga weyn ee magaalada.
Argagixisada intaas ayaaba tabar ka ah maadama aysan hada heynin wax kale oo ay dadka ku cabsi galiyaan waa iney tabar gooyaan oo ay miinadaasi isticmaalaan. qiimaha la kala siisto qoryaha fudud ayaa hada aad uga dhacay hoos kedib markii dhalinyarada Somaliyeed bilaabeen iney gataan qorayga ay heystaan kedibna ay u baqoolaan wadamada deriska ah iyo deganada ay nabada ka jirto sida Somaliland iyo Puntland. inta badan hogaamiyaasha Alqacida iyo kuwo Shabaab xaasaskoodu waxey ku nool yahiin gobolada waqooyi galbeet oo waxaa magan galyo siiyey qoyska uu ka soo jeedo hogaamiyaha Shabaab ina Godane si ay halkaas ugu noolaadaan.
Alqacidada Hiiraan waxaa ka fashilmay qorshe ay dhulka hoosti kaka qodeen godad waaweyn oo ay miino ku aaseen difaacne ineyka galaan ay doonayeen laakinse dhulkii ay ka qodeen ayaa la dul degay kedib markii si sahlan ay ciidamada Hiiraan ee naftood hurayaasha ah u heleen qidadii dagaalka iyo macluumaad aad muhiim ugu ah oo ay hada si sahlan ku helaan.
Jabka guud ee soo gaaray iyo niyad jabka helay Alqacidada Somaliya xaguu ka yimid?
Alqacidada Somaliya waxii ka horeeyey kacdoonkii ka curtay wadamo badan oo Carbeed waxey ahaayeen urur dhinac kasta ka dhisan xag dhaqaale, daawo, hub iyo ciidanba. nasiib wanaag rabshadahii ka dhacay wadankaasi Tunisiya oo ilaa hada ku socda Libiya iyo Sacuudiga waxey ku noqotay dhabar jab weyn waayo Alqacidada Somaliya iyo kuwa Afganistaanba waxey dhaqaalaha ka heli jireen dowlado Carbeed iyo shaqsiyaad Tujaar ah oo iyagu si toos ah ugu biili jiray xaasaska iyo caruurta ay nimankoodu ka dagaalamaan Somaliya iyo Afganistaan rabshadahii kedibna waxaa istaagay dhaqalo fara badan oo si sahlan lagu heli jiray.
Hada arinta waxey mareysaa inteen galaa meel ala. wajiyadii xijaabka la gashan jirayna oo marada madow lagu xiri jirayne waa la furay si dadka loogu ekaato. natiijada rasmiga ah waa in ay jabeen waxyarna u harsan tahay argagixisada xaqdarada ku dagaalameyso.
· admin on March 09 2011 12:11:57 · 0 Comments · 2833 Reads ·
14,599,940 unique visits